Anyị na-etinye aka na ụlọ ọrụ ihe owuwu ụlọ ebe ọ bụ na 2006
Email Nkwado info@yongyuglass.com
Kpọọ Nkwado 0086-400-089-8280
LABER® U iko mmanya
Akwa arụmọrụ U profaịlụ iko usoro
Low ígwè U profaịlụ iko ọgbọ ọgbọ usoro
Tinted / Frosted / Low-E U profaịlụ iko
Ihu / n'ihu mgbidi mgbochi
Jumbo / iko nchekwa dị elu
Dupont SGP laminated iko
Enyo iko & Laminated iko
Low-E gwara mmanụ iko nkeji
Igwe ihe nchekwa na mgbidi
Sistemụ ice rink
Nchekwa iko iko / iko ọdọ mmiri fences
Ogwe iko nchekwa
Glasslọ ime ụlọ nchekwa nchekwa
Smart iko / PDLC iko
Clear / Low ígwè n'obi iko
Igwe / iko oyi na-egbuke egbuke
Main Ngwaahịa na nkọwapụta
LABER® U Glass Profaịlụ
Glasslọ Nche Nchekwa na Ngere
Ihu ihu / Mgbochi Wall Glass
Jumbo / Oversized Nchekwa iko
Smart iko (Light akara iko)
Dupont Ikike SGP Laminated Glass
Karịsịa anyị dị mma na:
1) Nche U ọwa iko
2) Curved n'obi iko na curved laminated iko;
3) Jumbo size nchekwa iko
4) Ọla kọpa, isi awọ, ọchịchịrị isi awọ
5) 12/15 / 19mm oké n'obi iko, doro anya ma ọ bụ àjà ihe ọ ultraụ -ụ-doro anya
6) Igwe arụmọrụ PDLC / SPD dị elu
7) Dupont nyere ikike SGP laminated iko
Gịnị bụ U profaịlụ iko / U ọwa iko?
Gịnị bụ U profaịlụ iko / U ọwa iko? U profaịlụ iko / U ọwa iko bụ translucent U ekara iko mepụtara na ọtụtụ obosara sitere na site 9 ″ 19 ″, ogologo ruo 23 ụkwụ, na 1.5 ″ (maka ime ojiji) ma ọ bụ 2.5 ″ (maka mputa ojiji) flanges. Ogwe ndị ahụ na-eme ka iko iko akụkụ atọ na-akwado onwe ya, na-enye ya ohere ịmepụta ogologo iko na-enweghị ngwụcha nke iko na obere ihe eji emepụta - ezigbo maka ngwa ọkụ. U profaịlụ iko / U ọwa iko dịtụ mfe iji wụnye. An ...
Igwe Igwe Nche / Ikuku Nchekwa
Basic Info Ma gị Bent, Lent Laminated ma ọ bụ Bent insulated Glass bụ maka nchekwa, nchekwa, mkpuchi ma ọ bụ arụmọrụ arụmọrụ, anyị na-enye Top Quality Products & Customer Service. Enwere iko dị ọcha / iko ghere oghe Dị n'ọtụtụ nha, ụdị, na agba Radiuses ruo ogo 180, ọtụtụ radii, min R800mm, ogologo arc ogologo 3660mm, max elu 12 mita Clear, agba ọla, isi awọ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ iko na-acha anụnụ anụnụ Curved laminated iko / Ikpobiri laminated iko Dị na a dịgasị iche iche nke c ...
Ihe na-egbuke egbuke & Efere Frit & Frosted-Low-E U Profile Glass / U Glass Glass
Basic Info Tinted U profaịlụ iko nwere agba nke na-ebelata ma visual na radiant transmittances. Igwe iko a na - ekpochapu ihe na - achọ ọgwụgwọ ọkụ oge niile iji belata nrụgide nrụgide na nkwụsịtụ ma na - echegharị ọkụ ọkụ ahụ. Anyị tinted U profaịlụ iko ngwaahịa na-abịa na a nso nke na agba na-ota site ìhè nnyefe. A na-atụ aro ka ị nye iwu maka iko iko maka ezigbo agba nnochi. A na-agbapụ agba agba agba nwere agba na 650 Celsius n’elu b ...
Glasslọ Nche Igwe Nche / Ogige ọdọ mmiri
Basic info Debe echiche site na oche gị na ọdọ mmiri gị ma kpochapụ ya na sistemụ igwe eji agba mmiri. Igwe ihe eji emegharị iko / ọdọ mmiri juputara na balusters iko, n'ime ma ọ bụ n'èzí, ịwụnye sistemụ okporo ụzọ iko ụzọ bụ ụzọ dị ọkụ iji nweta nlebara anya ma weta ọdụ ụgbọ mmiri / ọdọ mmiri na-eme ka ndụ dị ndụ. Njirimara 1) Igwe eji achọ mma dị elu na-enye ọhụụ dị ugbu a ma na-eme ka usoro ụgbọelu ndị ọzọ eji eme ihe taa. N'ihi na ọtụtụ ndị, na iko oche handrails bụ consi ...
Werlọ Ime Nchekwa lọ
Basic Info Smart n'obi mmiri ịsa ahụ: Jikwaa nzuzo gị mfe Site ugbu a gaa n'ihu, ihe niile ọ na-ewe bụ iwepụ ọkụ ọkụ iji mee ka ọnụ ụzọ mmiri ịsa ahụ mechie. Ejikọtara teknụzụ mara mma n'ime ngwaahịa anyị iji nyere gị aka ịgbanwe ọdịdị ha na ịchọrọ. Ma ị chọrọ izopụ n'anya prying ma ọ bụ mee ka ọkụ banye, ị ga-pịa bọtịnụ ahụ. Site na iko anyị nwere mmiri maka mmiri ịsa ahụ na ọnụ ụzọ, a na-echekwa nzuzo gị mgbe niile! Na-achọ iko iji gụọ ...
Clear / Low Iron n'obi Glass N'ihi Sholọ Ime ụlọ
Basic info Ka ihu ya, a ịsa ahụ ụzọ abụghị naanị a ịsa ahụ ụzọ, ọ bụ a stylistic nhọrọ na-esetịpụrụ ụda maka ọdịdị na obi nke gị dum ụlọ ịwụ. Ọ bụ otu ihe kachasị na ime ụlọ ịsa ahụ gị na ihe na-adọta mmasị kachasị. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ọ ga-arụkwa ọrụ nke ọma. (Anyị ga-ekwu maka nke a na nkeji.) N'ebe a na Yongyu Glass, anyị maara ụdị mmetụta ụzọ ịsa ahụ ma ọ bụ tub nwere ike ịme. Anyị makwaara na ịhọrọ ụdị kwesịrị ekwesị, ụdị, na ...
A na-emebe ihe eji enyo enyo na-ekpuchi anya dị ka sandwichi nke mpempe akwụkwọ 2 ma ọ bụ karịa iko mmiri na-ese n'elu mmiri, nke a na - ejikọta ya na onye na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ (PVB) n'okpuru okpomọkụ na nrụgide wee wepụ ikuku ， wee tinye ya n'ime -nkpali uzuoku ketulu iji ohere nke elu okpomọkụ na elu nsogbu agbazekwa a fọdụrụ obere ego nke ikuku n'ime mkpuchi nkọwapụta Ewepụghị laminated iko Max. size ： 3000mm × 1300mm Curved laminated iko Curved n'obi lami ...
Igwe dị mma, nke a na-akpọkwa iko na-achịkwa ọkụ, iko nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ iko nzuzo, na-enyere aka ịkọwapụta ụkpụrụ ụlọ, akụrụngwa, ime, na ụlọ ọrụ imepụta ngwaahịa.
Ọkpụrụkpụ: Kwa iji
Nha nkịtị: kwa usoro
Keywords: Kwa iji
Ngwa: Nkebi, ime ụlọ ịsa ahụ, mbara ihu, windo wdg
Oge Mbuga ozi: izu abụọ
Smart iko, a na-akpọ Switchable Privacy Glass, bụ ụdị ngwọta dị iche iche. E nwere ụdị iko abụọ dị iche iche, nke elektrọnik na-achịkwa otu, nke ọzọ na-achịkwa anyanwụ.
Arụ Ọrụ Dị elu U Profaịlụ Glass / U Channel Glass
Basic Info U profaịlụ iko ma ọ bụ akpọ U ọwa iko sitere Austria. Emekwara ya ihe karịrị afọ 35 na Germany. Dị ka otu n'ime ihe ndị a na-ahụkarị na nnukwu ọrụ ụlọ, a na-etinye ufile profaịlụ U na Europe na America. A na-ede akwụkwọ maka U profaịlụ iko na China site na 1990s. Ma ugbu a, ọtụtụ mpaghara dị na China na-eji ya eme ihe maka usoro nhazi mba ụwa. U profaịlụ iko bụ otu ụdị iko nkedo. Ọ bụ ọganihu nke akpụ na t ...
Igwe Igwe Uhie Ala U / U U Igwe Igwe Igwe Ike
Basic Info Low iron U profaịlụ iko ike ọgbọ iko ụlọ (UBIPV) ikpokọta uru nke U profaịlụ ụlọ iko na anyanwụ ike ọgbọ usoro iji na-akwalite green gburugburu ebe obibi-echebe na ume-azọpụta na emission Mbelata. UBIPV na obodo nwere ike jikọta ọnụ iji mee ka fotovoltaic bụrụ akụkụ nke ndụ mmadụ. Ọbụghị naanị na ọ bụ ihe eji ewu ụlọ, mana ọ nwekwara ike nweta ebumnuche nchekwa na ume na -emepụta ume, yana enwere ike jikọtara ya na ...
Anyị ọhụụ bụ ịkọrọ ndị comparative uru nke China ụkpụrụ ụlọ iko ụlọ ọrụ na ndị ahịa, na-enye ndị ahịa na-eri-irè ngwọta, na iji nweta mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa.
Nyocha ngwa ngwa nke iko Samrt
RFQ: Ọgwụ na pụrụ iche U profaịlụ iko
Etu esi wunye U nkebi ime-ime
Ntinye nke U-iko
U profaịlụ iko ihe owuwu
Copyright - 2010-2020: Yongyu Glass Ikike niile echekwabara.